i-zkipster: Izixazululo zohlu lwezivakashi zemicimbi nezinkomfa Martech Zone
zkipster: Izixazululo zohlu lwezivakashi zemicimbi nezinkomfa
NgoLwesine, Februwari 13, 2014 NgoLwesine, Februwari 13, 2014 Douglas Karr
Ngobunye ubusuku ngabheka kulo mcimbi. Kwaba ukuhleleka okujwayelekile… abantu abambalwa bezokuphatha bebaleka ukubheka igama lami ohlwini lwababekhona olunamakhasi amaningi. Ukuthatha imizuzu embalwa ukuyifunda, bagcina belitholile igama lami bese belihlola - bese betshelana ukuze bonke bakwazi ukulihlola. Emicimbini emikhulu engiya kuyo, ukungena kungabhalwa ngama-alfabhethi… futhi ama-K abonakala njalo njengolayini abade kunabo bonke! Abantu ekugcineni kohambo lwezinhlamvu zamagama bangene.
Ngiyathanda ukuthi kunabantu emhlabeni abakholelwa ukuthi lezi yizinkinga ezingaphathwa kalula ubuchwepheshe. Abantu ku zukipster wenze lokho nje, ukwakha uhlelo lokusebenza lwamafu lwamathebulethi nama-smartphone avumela abasebenzi bomcimbi ukuthi bathole kalula futhi bahlole labo abakhona. Wonke umuntu ohlola abantu uvuselelwa ngokuzenzakalela ngoba bonke basebenza kusuka kuhlelo lokusebenza olufanayo.
Ngokwengeziwe, banesici esengezwayo esisiza ukuvimbela abakhohlisi ekungeneleni emicimbini yakho. Izithombe zinamathiselwe kuhlu lwababekhona ukuze ukwazi ukuziqinisekisa njengoba zingena kumcimbi. Ungaba nokuthi uhlelo luthumele izexwayiso lapho abakhona be-VIP befika. Umbono omuhle!
Tags: uhlu lwababekhonauhlu lwezivakashizukipster
Ingabe Amakhasimende Akho AYAKUTHANDA?
Ukukhula kokugenca kokumaketha kokuqukethwe